သမီးရညျးစားတှေ ဘာ့ကွောငျ့ ခဏခဏ ပွတျနကွေတာလဲ
HomeLoveသမီးရညျးစားတှေ ဘာ့ကွောငျ့ ခဏခဏ ပွတျနကွေတာလဲ
ဒီခတျေမှာ ခဈြသူရညျးစား သကျတမျး2နှဈကြျော မွဲဖို့က မလှယျပါဘူး ။5နှဈ အထကျ အတူ ဖွတျသနျးသှားဖို့ ဆိုတာ ပိုလို့တောငျ မလှယျကူတဲ့ ကိစ်စပါ ။ သံယောဇဉျတှနေဲ့ ခညျြနှောငျ ထားလညျး အလကား ပါပဲ ။ မိဘအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ Peace ဖွဈထားလညျး အပိုပါပဲ ။ ဘုရားစူး မိုးကွိုးပဈ ကြိနျထားလညျး သစ်စာမဲ့တာ ပါပဲ ။ Public အထိ ခပြွထားခဲ့လညျး ဝေးရတာပါပဲ ။ နှဈတှေ မနညျးဘူး အတူရှိခဲ့ကွလညျး ပွတျတာပါပဲ ။
ညလုံးပေါကျ ဖုနျးတှပွေောခဲ့ Chat ခဲ့ကွတယျ ။ ဘယျနရော သှားသှား သော့ခြိတျလို ကပျပါ ခဲ့ကွတယျ ။ ကိုကိုတှေ အသဲတခွမျးတှေ ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါခဲ့ကွတယျ ။ ဖုနျး Screen မှာ Couple ပုံ တငျထားခဲ့ကွတယျ ။ ဘဝအတှကျ Plan တှေ အတူ ခမြှတျခဲ့ ကွတယျ ။ ရစေကျ ကုနျတော့လညျး လကျပွ နှုတျဆကျကွတာ ပါပဲ ။
လူတှကေ အပွောငျးအလဲတှေ မွနျလာကွတယျ ။ ကတိကို ထမငျးစား ရသေောကျ လှယျလှယျ ပေးလာကွတယျ ။ အခြိနျမရှေး ဖေါကျပွနျဖို့ စဉျးစားတတျလာ ကွတယျ ။
ရညျးစား ရှိတဲ့သူ ကိုမှ အသအေလဲ လိုကျဆှဲခငျြ ကွတယျ ။ သူမြား အတှဲပွတျမှ စားဝငျ အိပျပြျောလာ တတျကွတယျ ။ ပှဲလနျ့တုနျး ဖြာဝငျခငျး ၊ အခြောငျဝငျနှိုကျ မွညျးခငျြလာ ကွတယျ ။
ခဈြသူ ရှိရကျနဲ့ နောကျထပျ အသဈ ထပျထားခငျြကွတယျ ။ နှလုံးသား Storage က 256 GB အထိ ဆံ့လာကွတယျ ။ ဖေါကျပွနျခငျြတာနဲ့ပဲ အသံတိတျ နှိပျစကျလာ ကွတယျ ။
တခြို့ဆို Anni တောငျ မလုပျလိုကျရဘူး ။ ပွဿနာတှေ တကျ ၊ တာ့တာ bye bye လုပျရပွီ ။ တခြို့ကပြွနျတော့ လပိုငျးလောကျပဲ ကွာလိုကျတာ ။ မချေါမပွောတှေ ဖွဈပွီး ကိုယျ့လမျး ကိုယျဆကျလြှောကျရပွီ ။ တခြို့တှကေ ရကျသတ်တပတျပဲ တှဲရသေး ရှေးခယျြမှု မှားမှနျး သိပွီး မသိမသာလေး ပွတျသှားကွရော ။
တကယျဆို ခဈြသူ ရညျးစားတှေ ဖွဈလာတာက တယောကျကို တယောကျ ခဈြလို့ပဲ မဟုတျလား ?
ဘာ့ကွောငျ့ ရနျဖွဈ စကားမြားတိုငျး လမျးခှဲခငျြနေ ရတာလဲ ? မာနတှေ အပွိုငျအဆိုငျထား အနိုငျယူခငျြနရေတာလဲ ? Lotteria က ကွကျကွျောကို မပွေီ့း လမျးဘေးက ဘယာကွျောကို စိတျရောကျနရေ တာလဲ ?
နှဈပေါငျး မနညျးဘူး အခကျအခဲ ပေါငျးစုံ ကြျောလှား ဖွတျသနျးလာခဲ့တဲ့ အခဈြရေး တခု မိနဈပိုငျးလောကျ အသေးအဖှဲ့ Case လေးကွောငျ့ အပကျြပကျြနဲ့ နှာခေါငျးသှေးထှကျ အဆုံးရှုံး မခံလိုကျပါနဲ့ ။
လကျရှိ ကိုယျ့ဘေးက ခဈြသူလောကျ ဘယျသူကမှ ဒီကမ်ဘာမှာ သငျ့ကို ခဈြပေးနိုငျမှာ မဟုတျသလို သငျ့ရဲ့စိတျကိုလညျး Scan ဖတျပေးနိုငျမှာ မဟုတျဘူးလေ ။
သမီးရည်းစားတွေ ဘာ့ကြောင့် ခဏခဏ ပြတ်နေကြတာလဲ
ဒီခေတ်မှာ ချစ်သူရည်းစား သက်တမ်း2နှစ်ကျော် မြဲဖို့က မလွယ်ပါဘူး ။5နှစ် အထက် အတူ ဖြတ်သန်းသွားဖို့ ဆိုတာ ပိုလို့တောင် မလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စပါ ။ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ချည်နှောင် ထားလည်း အလကား ပါပဲ ။ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ Peace ဖြစ်ထားလည်း အပိုပါပဲ ။ ဘုရားစူး မိုးကြိုးပစ် ကျိန်ထားလည်း သစ္စာမဲ့တာ ပါပဲ ။ Public အထိ ချပြထားခဲ့လည်း ဝေးရတာပါပဲ ။ နှစ်တွေ မနည်းဘူး အတူ ရှိခဲ့ကြလည်း ပြတ်တာပါပဲ ။
ညလုံးပေါက် ဖုန်းတွေပြောခဲ့ Chat ခဲ့ကြတယ် ။ ဘယ်နေရာ သွားသွား သော့ချိတ်လို ကပ်ပါ ခဲ့ကြတယ် ။ ကိုကိုတွေ အသဲတခြမ်းတွေ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ခဲ့ကြတယ် ။ ဖုန်း Screen မှာ Couple ပုံ တင်ထားခဲ့ကြတယ် ။ ဘဝအတွက် Plan တွေ အတူ ချမှတ်ခဲ့ ကြတယ် ။ ရေစက် ကုန်တော့လည်း လက်ပြ နှုတ်ဆက်ကြတာ ပါပဲ ။
လူတွေက အပြောင်းအလဲတွေ မြန်လာကြတယ် ။ ကတိကို ထမင်းစား ရေသောက် လွယ်လွယ် ပေးလာကြတယ် ။ အချိန်မရွေး ဖေါက်ပြန်ဖို့ စဉ်းစားတတ်လာ ကြတယ် ။
ရည်းစား ရှိတဲ့သူ ကိုမှ အသေအလဲ လိုက်ဆွဲချင် ကြတယ် ။ သူများ အတွဲပြတ်မှ စားဝင် အိပ်ပျော်လာ တတ်ကြတယ် ။ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာဝင်ခင်း ၊ အချောင်ဝင်နှိုက် မြည်းချင်လာ ကြတယ် ။
ချစ်သူ ရှိရက်နဲ့ နောက်ထပ် အသစ် ထပ်ထားချင်ကြတယ် ။ နှလုံးသား Storage က 256 GB အထိ ဆံ့လာကြတယ် ။ ဖေါက်ပြန်ချင်တာနဲ့ပဲ အသံတိတ် နှိပ်စက်လာ ကြတယ် ။
တချို့ဆို Anni တောင် မလုပ်လိုက်ရဘူး ။ ပြဿနာတွေ တက် ၊ တာ့တာ bye bye လုပ်ရပြီ ။ တချို့ကျပြန်တော့ လပိုင်းလောက်ပဲ ကြာလိုက်တာ ။ မခေါ်မပြောတွေ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ဆက်လျှောက်ရပြီ ။ တချို့တွေက ရက်သတ္တပတ်ပဲ တွဲရသေး ရွေးချယ်မှု မှားမှန်း သိပြီး မသိမသာလေး ပြတ်သွားကြရော ။
တကယ်ဆို ချစ်သူ ရည်းစားတွေ ဖြစ်လာတာက တယောက်ကို တယောက် ချစ်လို့ပဲ မဟုတ်လား ?
ဘာ့ကြောင့် ရန်ဖြစ် စကားများတိုင်း လမ်းခွဲချင်နေ ရတာလဲ ? မာနတွေ အပြိုင်အဆိုင်ထား အနိုင်ယူချင်နေရတာလဲ ? Lotteria က ကြက်ကြော်ကို မေ့ပြီး လမ်းဘေးက ဘယာကြော်ကို စိတ်ရောက်နေရ တာလဲ ?
နှစ်ပေါင်း မနည်းဘူး အခက်အခဲ ပေါင်းစုံ ကျော်လွှား ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အချစ်ရေး တခု မိနစ်ပိုင်းလောက် အသေးအဖွဲ့ Case လေးကြောင့် အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက် အဆုံးရှုံး မခံလိုက်ပါနဲ့ ။
လက်ရှိ ကိုယ့်ဘေးက ချစ်သူလောက် ဘယ်သူကမှ ဒီကမ္ဘာမှာ သင့်ကို ချစ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်သလို သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်း Scan ဖတ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ ။